Abantu ubudala maphakathi nabadala iyakwazi akujabulisi futhi kubuhlungu ngokuzumayo okwenzeka ubuhlungu. Izinso ungomunye izitho ebaluleke kakhulu umzimba wethu. Ngomsebenzi wokugqokwa oncomekayo edingekayo ukuze ihambisane yokuphila efanele futhi umzimba. Okubalulekile kuyinto Ukudla, ukuphuza uketshezi oluningi futhi ukugwema imikhuba eyingozi. Ikakhulukazi ezilimaza izinso utshwala.
Uma ubuhlungu izinso, izimbangela Kufanele kufunwe e izinguquko esingokwemvelo, ukusebenza, abhubhisayo futhi ukuvuvukala emzimbeni. Ngokuvamile imbangela yalesi uphawu is ayithole kusukela umthondo, wamathumbu noma ureters microflora pathogenic. Ikhambi best kungaba luhlolo ephelele nokuzithoba kwabo bonke cwaningo kunesidingo. ukusazi ngokunembile isifo esikuphethe kulesi simo kuphela uchwepheshe onolwazi kungakwenza ukuletha.
Ngokuvamile isiguli ecabanga ukuthi ngibanjwe izinso abandayo, futhi empeleni emizweni ubuhlungu kwaphakama ngokusebenzisa iphutha ukuvuvukala. Yiqiniso, icala bangaba hypothermia, kodwa kuphela lapho umuntu isikhathi eside emanzini abandayo, noma ngaphandle izingubo ku frost eqinile. Uma ubuhlungu kule ndawo size emuva kokuthi isiguli izinso imikhuhlane ke kakade ngaphambi eqale ukuthuthukiswa inqubo yayo ukuvuvukala kuzo. Ucwaningo kuzosiza ukukhomba Amagciwane noma pyelonephritis.
Uma izinso ubuhlungu, ungasebenzisa ukuqoqwa Healing of amakhambi isisu. Of ochwepheshe ephumelela kunazo ukuhlonza knotweed, cornflower, itiye izinso, umjunipha, parsley, birch nemiqumbe futhi amahlamvu abasha, horsetail, izimbali elderberry omnyama bearberry. Kunconywa ukuba ukhethe ngazinye, aphuze izifundo ezigcwele kuphela. Daily isiphuzo Iziphungo kanye infusions amakhambi phezu nengxenye noma izinyanga ezimbili kuzosiza ukuqeda iqolo.
Izinso zidinga ekuphathweni nsuku zonke izinto eziningi ezanele kwamanzi ahlanzekile elicwengekileyo. Ukuhlanzwa ngokusebenzisa lemifanekiso kuyadingeka ngoba okuwukuphela kwepayipi lamanzi yakhiwa emanzini ane-chlorine ngokweqile futhi izinsimbi ezisindayo. Uma uhlangabezana kabi esifundeni lumbar wanquma ukuyeka kubo ngezinceku ukushisa. Kufanele kuqashelwe ukuthi zokukhwabanisa idatha akuvumelekile osteochondrosis noma radiculitis, kodwa umzimba efudumele kakhulu is hhayi Kunconywa. Uma izinso ugula ngenxa iphutha ukuvuvukala, ukushisa eyengeziwe kuphela khawuleza ukuthuthukiswa yayo. Uma ukuvuvukala engekho, futhi izinga lokushisa komzimba kungokwemvelo, colics kwezinso luqedwe ngokusebenzisa heater noma ubhavu ashisayo.
izilonda ezithathelwanayo, kumiswa amatshe futhi ukulimala kungabangela ubuhlungu obukhulu nezinso. Lapho ukuvuvukala inikezwa Yiqiniso sasivumela eside kwama-antibiotic. He is amaviki amabili kuya kwayisithupha. Uma umuntu amasosha omzimba sasivumela eqinile, umzimba angabhekana ngayo ngokuphumelelayo ukuvuvukala ngokuzimela. Kulokhu, ukwelashwa herbal kuzosiza ukuvimbela ukuthi kungenzeka igciwane yesibili.
Uma ungase uhlukumeze izinso ngenxa iphutha urolithiasis, ungakwazi iphendukele indlela bokuthi imithi yendabuko eminyaka. Kuzothatha sika wort iSt John, Thyme, horsetail imbiza, celandine, Mint, ukolo utshani izimpande futhi amahlamvu lingonberry. Zonke amakhambi kufanele kuthathwe ngezabelo alinganayo, ukuze yi wayeneminyaka engaba ngamashumi amathathu amagremu weqoqo esiphelele. Bagcizelele egcwele amanzi abilayo itiye herbal for isigamu sehora, bese baphuze ungiphuzise ihora.
Luningi izidakamizwa futhi bawabulale ubuhlungu, nokwelashwa ( "Avisan", "Olimetin", "Cystenalum"). Ngokuvamile Uchwepheshe inikeza lwemithi ezithile, okuyinto kumelwe kuqala babe kokuthola imithi, bese eziyishumi-zokuvimbela usebenzisa ngezindleko zemithi engamakhambi. Lokhu kunengxenye ekwenzeni ikhambi eliphelele sifo futhi kuvimbele amathuba kabusha ukutheleleka.
Lapho ingane uqale ukuxubha amazinyo akho nokuthi ukufundisa ke?